Golaha Wakiillada oo Markii u horreysay Xafiis-hoosaadyo ka Furanaya Gobollada Dalka wakhti muddo-xileedkoodu gabaabsi yahay - Somaliland Post
Home News Golaha Wakiillada oo Markii u horreysay Xafiis-hoosaadyo ka Furanaya Gobollada Dalka wakhti...
Golaha Wakiillada oo Markii u horreysay Xafiis-hoosaadyo ka Furanaya Gobollada Dalka wakhti muddo-xileedkoodu gabaabsi yahay
Boorama (SLpost)- Golaha Wakiillada Somaliland, ayaa markii u horreysay muddada Rubuc Qarniga ah ee dalku jiray xafiisyo ka furanaya caasimadaha gobollada dalka.
Guddoomiyaha Guddi-hoosaadka joogtada ah ee golaha Wakiillada Md Ibraahim Mahdi Buubaa oo uu weheliyo Xog-hayaha Guud ee Golaha Wakiillada Cabdirisaaq Siciid Ayaanle, ayaa maanta socdaal ku gaadhay xarunta gobolka Awdal ee Boorama, halkaas oo lagu wado maalinta Berri ah in laga furo xafiiskii u horreeyey ee golaha Wakiillada ku yeesho gobollada Dalka.
Dhismayaasha Xarumaha u noqon doona Xafiisyada golaha Wakiillada ee gobollada dalka, ayaa la sheegay inay muddo bilo ah u kiraysnaayeen, isla markaana loo dhammaystiray Agabkii lagaga hawl-galayey xafiisyadaas.
Xildhibaan Ibraahim Mahdi Buubaa oo warbaahinta uga xog-warramay ujeeddada socdaalkooda Boorama, ayaa sheegay in Golahooda ku hawlan yahay inay dar-dar gelin ku sameynayaan isla markaana ay gobollada dalka ku ballaadhinayaan Hawlaha Qaran ee Golaha Wakiilladu u hayo Qaranka.
Munaasibad lagu daah-furayo Xafiiska Golaha Wakiillada ee gobolka Awdal, ayaa lagu wadaa in maalinta Berri ah lagu qabto guri loogu talo-galay inuu xarun u noqdo Xafiis-hoosaadyada Golaha Wakiillada ee gobollada dalka, halkaas oo ay ka hawl-gali doonaan Guddi Hoosaadyada kala duwan Golahaasi ka kooban yahay.
Xarunta Gobolka Saaxil ee Berbera ayaa la qorsheeyey inay noqoto magaalada labaad ee Golaha Wakiilladu xafiiskooda ka yaglooli doono, halka xarunta gobolka Togdheer ee Burco ay noqon doonto meesha saddexaad ee la qorsheeyey in lagu daah-furo Xafiiskooda saddexaad, iyada oo gobollada kale ee dalkana sidaas lagu dhammaystiri doono.
Xafiis-hoosaadyada cusub ee Golaha Wakiilladu ka hirgelinayo gobollada dalka, ayaa ku soo beegmaya wakhti ay muddo kooban oo sannad ku beegan ka hadhsan yahay muddo-xileedka Aqalka Wakiillada Somaliland siddeed-sanno jirsaday, iyada oo tiraba dhowr jeer dib u dhac ku yimi doorashadii lagu beddeli lahaa Golaha immika jira oo muddo-kordhin loo sameeyey sannadkii hore.